Qaphela yonke into emitsha eza kwindlela yokuyila | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Idatha eqokelelwe kwizigidi zophando kunye nokukhuphela kubasebenzisi kwihlabathi liphela banokuqikelela iindlela ezintsha zokuyila, njengomzekelo kwaye enye yazo Shutterstock, i umboneleli okhokelayo wehlabathi wemifanekiso kunye nomculo, upapashe ingxelo yayo ethetha nge Iimpawu ze-2017, ingxelo ekhuthazwe yidatha eqokelelwe kukhuphelo lwabathengi kwihlabathi liphela kunye nophando olwenziwe kunyaka ophelileyo.
Ihlalutyiwe liqela leenzululwazi, iingcali zoyilo, kunye nabaxhasi bomxholo, le ngxelo igqiba ngezinto eziya kuba nefuthe kulungelelwaniso ngokutsha kunye nobuhle kuyilo kwi-2017 ngokwemifanekiso, umculo kunye nevidiyo.
1 I-Shutterstock iphezulu kweendlela zokuyila
2 Imikhwa ekudala ilindelwe ngabaqulunqi
I-Shutterstock iphezulu kweendlela zokuyila
Iibhiliyoni zabasebenzisi bathathe inxaxheba kuphando lwe Shutterstock kwaye ngaphezulu kwekhulu lesigidi lemifanekiso bancede bafumanisa ukuba yintoni phezulu kwihlabathi, inkcubeko, uyilo kunye nezinto ezibonwayo ehlabathini lonke.
Le ngxelo ikwachaza ukwanda kwepesenti kuphando kunyaka ophelileyo kwigama ngalinye eliyintloko kwaye oko kukuthi iShutterstock ibandakanya abayili, iibhlog kunye nabayili bemizobo.
Uqikelelo lwalo nyaka lubonisa Umahluko omkhulu phakathi kwehlabathi lokwenyani kunye nehlabathi ledijithali, phakathi kwetekhnoloji nendalo naphakathi kwexesha elidlulileyo nelizayo kwaye uyilo olunombala omhlophe luya kuba nokunyuka okungaphezulu kwamakhulu amane eepesenti ngaphezulu konyaka ophelileyo, yongeza imvakalelo emacala mathandathu. Lo ngumkhwa onokubukhali, ontsonkothileyo, okanye onokubonisa iipateni zendalo.
Ngokuphathelele emoji Singatsho ukuba kuyakubakho ukonyuka okungaphezulu kwamakhulu amathathu eepesenti xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, oku kunjalo uhlobo lwehlabathi lonxibelelwano kuba i-emoji idlula ulwimi. Iihafu zetoni ziyakunyuka ngamakhulu amabini eepesenti ngaphezulu konyaka ophelileyo, zilawula ukukhupha iphepha cinezela, ubugcisa be pop kunye nomabonakude we-analog, Ubuhle beemidton bubonakaliswa kukungafezeki.
Eyaziwayo Intloko phezulu izakonyuka ngaphezulu kwekhulu leepesenti ngaphezulu konyaka ophelileyo, apho ipaneli yesitayile entle iza kubonakala kwaye yile kwiwebhusayithi yeShutterstock bathi Ingxelo ye-2017 yeendlela zokuyila kulindeleke kakhulu ngoochwephesha bokuyila kwihlabathi liphela befuna ukukhuthazwa okubonakalayo kunye nesikhokelo sonyaka ozayo, oku kutshiwo liGosa eliyiNtloko leNtengiso uJeff Wiser.
Imikhwa ekudala ilindelwe ngabaqulunqi
Lo nyaka ujolise kwi ungquzulwano phakathi kwendalo netekhnoloji ngezinto ezithile zoyilo ezenza uhlobo lwee-organic textures ezibonisa umnqweno weepateni eluhlaza kunye nezendalo.
Las iindlela zoyilo Zichasene ngokupheleleyo kwaye kulapho indalo iyakuma ngaphandle kwezobuchwephesha xa kuthelekiswa kwaye kwindalo ubume bezinto eziphilayo kunye neetropiki ziya kuma kwaye kwicala letekhnoloji glitch kunye laser cut.
Iimpawu zomculo ziya kusibonisa izingqisho ezinesandi ezizolile kodwa kwangaxeshanye zisenze sizive siphila, ezi ikwangabo iingoma eziqhelekileyo zokuphumla, isingqisho esisesibhakabhakeni kunye nomculo onamandla. Ngokumalunga neenethiwekhi zentlalo singatsho njalo eyona mifanekiso ithandwayo yile isibonisayo imimangaliso yendalo kwaye inokusetyenziswa njengomthombo wokhuthazo, ukuqaqambisa imibala efudumeleyo, ukubonakalisa, imibala yemibala eqondayo kunye noburhabaxa obugqithisileyo.
Ngokuphathelele iindlela ezibonakalayo Eyona nto ifunwa kakhulu kwihlabathi liphela, singatsho ukuba eSpain zizitrasi, eFrance yindawo ephakathi, eJapan ubukrelekrele bokuzenzela, ePoland ukwenziwa kwendalo kokutya, eUnited States jalapeños, kuyilo lwaseArgentina, eBrazil ubufazi kwaye eVietnam abasetyhini, zonke ezi zinto ziqhubekayo izimvo zabantu abasebenza njengezinto eziyilayo kunye nabayili bemizobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iindlela zokuyila zango-2017